Taliyihii booliiska Afgooye iyo saddex ilaaladiisa kamid ah oo lagu dilay qarax - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTaliyihii booliiska Afgooye iyo saddex ilaaladiisa kamid ah oo lagu dilay qarax
Taliyihii booliiska Afgooye iyo saddex ilaaladiisa kamid ah oo lagu dilay qarax
March 22, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Qarax gaari. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliyihii booliiska magaalada Afgooye iyo saddex ilaaladiisa kamid ah ayaa lagu dilay qarax maanta oo Axad, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka.
Taliyaha oo lagu magacaabi jiray Cabdulqaadir Cusmaan Mursal iyo saddexda ilaaladiisa ah ayaa dhintay kadib markii miinada dhulka lagu aaso ay la qaraxday gaarigii ay wateen duleedka Afgooye, oo ah magaalo qiyaastii 30 kiilomitir dhanka koonfur-galbeed kaga beegan Muqdisho.
Maleeshiyasa Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, sida ay tabisay idaacada Al-Shabaab, ee Radio Al Andalus.
November 28, 2018 Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika oo Muqdisho yimid
Somali lawmakers sets date for presidential election
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s lawmakers on Wednesday announced that the country’s presidential election will take place on February 8. The presidential election originally had been scheduled to take place in August, but Mohamoud’s administration has failed [...]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Afar xubnood oo katirsan xildhibaanada Jubbaland u matalaya aqalka sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah lagu doortay magaalada Kismaayo. Xubnaha la doortay ayaa waxaa kamid ah Cabdullaahi Shiikh Ismaacill [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyata ayaa wadahadal ay ku yeesheen khadka taleefoonka isku raacay in la hakiyo dhismaha derbiga ka socda xadka Kenya iyo Soomaaliya, sida ay ku [...]